Moscow Power Engineering Institute - Study in Russia
gaabinta : MPEI
aasaasay : 1930
Ardayda (qiyaastii.) : 2000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Moscow Power Engineering Institute
Qorto Moscow Power Engineering Institute
MPEI Tababar bachelor ah, Masters iyo takhasuska (injineerro) in 15 tilmaamaha iyo 73 specialties.National University Research “Moscow Power Engineering Institute” waa mid ka mid ah laga qaatay jaamacado farsamo of Russia ugu weyn. Waxay bixisaa tababar takhasus ah iyo cilmi-sayniska ee beerta firfircoon, injineernimada korontada, korantada radio, injineernimada computer.
MPEI leeyahay dhismayaasha waxbarasho oo casri ah, ka laboratories waxbarashada iyo sayniska, hostels ardayda ', goobaha tijaabo awood, a pilot-warshad, kulaylka iyo xoog warshad tacliimeed-cilmi ah, jaamacad ah park farsamo.
goobta waxbarasho ee Total waa 262450 m2 Tirada guud ee ardayda waa in ka badan 15000 dadka. aqbalo ardayda Annual 'wuxuu ku saabsan yahay 3000 dadka. Number of Ph.D.-ardayda iyo Dr. Sayniska. musharax yahay 620 dadka. Number of macalimiinta-buuxa waa 1560 dadka. iyaga From 17% waxay leeyihiin Dr ah. Sayniska. darajo iyo koobab professor buuxa, iyo 56% leeyihiin Ph.D ka. degrees.
MPEI Tababar bachelor ah, Masters iyo takhasuska (injineerro) in 15 tilmaamaha iyo 73 taqasusyo.
18 Golayaasha PhD-yihiin dhaqmaya MPEI. Ph.D The. iyo Dr. Sayniska. theses la difaacay karaa kalfadhiyada Golaha ee 43 taqasusyo.
MPEI waa liisan si wada tashi ah degrees socda (shahaadooyinka) in ay ka qalin la soo saaray shahaadado Ruush gobolka:
Bachelor of Science (Muddada waxbarashada waa 4 sano)
Specialist Ruqsado (Engineer, Economist, Maareeyaha iwm) (duration Waxbarashadu waa 1,5 sano ka dib Dabcan Bachelor)
Master of Science (Muddada waxbarashada waa 2 sano ka dib Dabcan Bachelor)
Philosophy Doctor (in farsamo, jireed-xisaabeed, sayniska dhaqaalaha) (Muddada waxbarashada waa 3 sano)
Doctor of Sciences (in farsamo, jireed-xisaabeed, cilmiga dhaqaalaha) (Muddada waxbarashada waa 3 sano)
goobaha dheeraad ah MPEI:
maktabadda MPEI, oo buug ee fund ka mid ah dhow 2.000.000 buugaag;
adag hostel loogu talagalay 5.000 dadka;
Rugta caafimaad ee ardayda: Idaacadda ambulance, qolalka dhakhtar ku takhasusay-', xarunta computer cudurka, sanatorium-preventorium ee ardayda (120 meelaha);
adag Sport: stadium “Energy”, hoolalka qalaama, hoolalka tababarka ee qaybaha gaarka ah, maxkamadaha tennis, barkadda dabaasha, dhibcood la kiraysto qalabka isboortiga;
saldhigyada madadaalada Ardayda ': Sports-kaambada “Alushta” , Sports-kaambada “Energy”;
saldhigyada kala duwan ee dhaqanka warshadaha ee ardayda;
Xafiiska design Ardayda ';
Golaha Dhaqanka dhowr hoolalka, dhismaha gaar ah qaybaha iyo kooxo yar yar, ee ardayda nasan habeenkii, waayo, xaflad ka mid ah ciidaha qaran ee ardayda ajinebiga ah ee MPEI iyo jaamacadaha kale ee Moscow;
cafe ardayda ', xarumaha cuntada.
machadka la dabaqay Qadiimiga ah.
Institute of automatics iyo sayniska kombiyuutarka.
Institute of dhibaatooyin waxtarka tamarta.
injineernimada Radio korantada machadka.
Kaamerada iyo qaaradda machadka injineernimada awood.
Institute of technology, dhaqaalaha iyo ganacsiga.
machadka injineernimada korontada.
machadka warshadaha Power.
Power injineernimada farsamada iyo xirfadlayda machadka.
Kuliyada koorsooyinka helitaanka.
Institute of aadanaha.
Machadka waxbarashada warshadaha “MPEI-FESTO”.
Institute of ammaanka warshadaha.
Ma rabtaa wada hadlaan Moscow Power Engineering Institute ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
dib u eegista Moscow Power Institute Engineering
Ku biir si ay ugala hadlaan of Moscow Power Engineering Institute.
Ural University Federaalka Yekaterinburg
Ruush Academy of Dhaqaalaha Qaranka iyo Maamulka Dadweynaha Moscow
Moscow Aviation Machadka Moscow